Aung Win Hein (Noble): September 2009
ကံမကောင်းအကြောင်းမလှတဲ့ အောင်မြင်သူတစ်ယောက် အကြောင်းကို ပြောရအောင်လား။
သူ့နာမည်က ဒဗလျူမစ်ချယ် ။
သူ့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ အလုပ်ကို အလာမှာ ထရပ်ကားနဲ့ဝင်းအောင်းမိတယ်။
လက်ဖျံရိုးကျိုးသွားတယ်။ တင်ပါးဆုံရိုး ကျိုးသွားတယ်။ မီးလောင်ခံလိုက်ရတယ်။
ဒီလိုနဲ့ လပေါင်းများစွာ ကုသမှုခံပြီး နောက်ထပ် လပေါင်းများစွာ လေ့ကျင့်ယူတော့မှ ပြန်လှုပ်ရှားနိုင်လာတယ်။
ဒါပေမယ့် သူ့မျက်နှာကိုမြင်ရင် တော်ရုံတန်ရုံ လူဆိုရင် လန့်သွားနိုင်တယ်။
တစ်မျက်နှာလုံး ဒဏ်ရာတွေ ဗလပွနဲ့ပါ။
လက်ချောင်း၊ ခြေချောင်းတွေ ဆိုရင်လည်း သူများနည်းတူ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မရှိ ရှာတော့ဘူး။
ကံများဆိုးချင်တော့ သိပ်မကြာခင်မှာဘဲ သူစီးလာတဲ့ လေယာဉ်ပျက်ကျပြီး အောက်ပိုင်းသေသွားပြန်ပါတယ်။
အောက်ပိုင်းသေနေတော့" ၀ှီးချဲယား "နဲ့ သွားလာလှုပ်ရှားနေရတဲ့
ရာသက်ပန် ဒုက္ခိတ တစ်ယောက်ဖြစ်သွားရပါတယ်။
ဘာမှမကြာလှတဲ့ ကာလ အတွင်းမှာ သေလောက်တဲ့ အန္တရာယ်ကြီး
နှစ်ခုနဲ့ ကြုံလိုက်ရတော့ သာမန်လူဆိုရင် စိတ်ဓါတ်ကျတာနဲ့ သေလောက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူက သန်းကြွယ်သူဌေးကြီး။
ဝှီးချဲယားနဲ့ လှုပ်ရှားရင်း သူ့အလုပ်ကို သူ ပုံမှန်လုပ်နေပါတယ်။
"အရင်က ကျနော် လုပ်နိုင်တာ တစ်သောင်းရှိရင်၊
ဒါပေမယ့် စိတ်ဓါတ်ကျနေလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲဗျာ။
ကျနော်ဘဝရဲ့ ကျန်တဲ့ ကာလကို ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ တစ်ထောင်ပေါ်မှာ ယူကျုံးမရဖြစ်နေမလား?
ကိုယ်လုပ်နိုင်သေးတဲ့ ကိုးထောင်ပေါ်မှာ အာရုံစိုက်မလား?
ကျနော့်ရဲ့အာရုံကို ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ ကိုးထောင်ပေါ်မှာနှစ်မြှုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။"
သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ စာရေးဆရာကြီး ဗော်လ်တိုင်းယားကို
သူနဲ့အတူ လှေစီးဖို့ ဖိတ်ခေါ် လိုက်ပါတယ်။
ဘုရင်ရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်ကို ဗော်လ်တိုင်းယားက ၀မ်းသာအားရ လက်ခံပါတယ်။
ပြီးတော့ သူတို့နှစ်ယောက်သား လှေစီးကြပါတယ်။
လှေက ကမ်းကထွက်ခါစပဲ ရှိသေးတယ်။
စာရေးဆရာကြီး ဗော်လ်တိုင်းယားက ကမန်းကတမ်း ကမ်းပေါ် ခုန်တက်လိုက်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဘုရင်ကလှောင်ပြုံး ပြုံးရင်း လှမ်းပြောလိုက်တာက
ကျနော်ကို ကြည့်... လုံဝကိုမကြောက်ဘူး”
“ ဒါဟာမထူးဆန်းပါဘူး၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘုရင်တွေက အများကြီး၊
စာတစ်အုပ်၊ စာတစ်ပုဒ် ဖတ်ပြီးတဲ့အခါတိုင်း
တွေးစရာ၊ ဒါမှမဟုတ် ရေးမှတ်စရာ တစ်ခုခု ကျန်ခဲ့သင့်ပါတယ်။
ဘာမှ မကျန်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ အချိန်ပေးလိုက်ရတာ ရှုံးပါတယ်။ စာရေးဆရာကြီးပြောတဲ့စကားမှာ ဘာတွေးစရာတွေရှိသလဲ
ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်း အများကြီးရှိအောင်
လူကြီးမင်းကရော အများထဲက တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တာလား?
ဒါမှမဟုတ်...တစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တာလား?
တစ်ခါတုန်းက လယ်သမားကြီး ဦးမောင်တင်ဟာ
ကံဆိုးချင်တော့....ဒီနှစ်လယ်တွေ မိုးဖျက်လို့အားလုံး ပျက်သွားတယ်။
ကံကောင်းချင်တော့..... အဝေးရောက်နေတဲ့ သားက သူ့ဆီလာဖို့ လေယာဥ်စီစဉ်ပေးတယ်။
ကံဆိုးချင်တော့.....လယ်သမားကြီးစီးတဲ့ လေယာဉ်ဟာ ပျက်ကျသွားပါလေရော!
ကံကောင်းချင်တော့.....လေထီးနဲ့ အချိန်မှီ ခုန်ဆင်းခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။
ကံကောင်းချင်တော့.....ကောက်ရိုးပုံ တည့်တည့်ပေါ်ကို ပြုတ်ကျ သွားပါတယ်။
နွားချေးပုံပေါ်မျက်နှာနဲ့မှောက်ကျ သွားပါတယ်။
ကံကောင်းချင်တော့.....လယ်သမားကြီး ဦးမောင်တင်ဟာ ဘာဒါဏ်ရာမှ မရခဲ့ပါဘူး။
ကံဆိုးလိုက်၊ ကံကောင်းလိုက်နဲ့ တစ်လှည့်စီ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
အမြဲတမ်း ကံကောင်း မနေတတ်သလို အမြဲတမ်း ကံဆိုး မနေတတ်ပါဘူး။
ကံကောင်းတဲ့အခါ အမြဲတမ်းလို့သဘောထားပြီး မာန မတက်သင့်သလို
ကံဆိုးတဲ့အခါ အမြဲတမ်းလို့ နားလည်မှုလွဲပြီး စိတ်ဓါတ်မကျသင့်ပါဘူး လို့
ဒီအကြောင်းအရာက မီးမောင်း ထိုးပြနေပါတယ်။
လူကြီးမင်းအနေနဲ့ ရီမောရင်း ဒါကို သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ရီစရာထဲက မောစရာတွေပေါ့ ခင်ဗျာ.....။
ငယ်ငယ်တုံးက... "မင်္ဂလာတရားတော် "ကိုအော်ကျက်ခဲ့ရဖူးတယ်။ ဘာတဲ့....
"အသေ၀နာစ...ဗာလာနံ၊ ဧတံမင်္ဂလ မုတ္တမံ"
"လူမိုက်ဆိုလျှင်၊ရှောင်သွေလွှဲလို့၊ မမှီဝဲနှင့်၊ ကင်းအောင်နေ။"
ထိုအချိန်က အဓိပ္ပါယ်ကို ကောင်းကောင်း နားမလည်ခဲ့ပါ။
အမေက "လူမိုက်ကိုမပေါင်းနဲ့"ဟု ပြောစဉ်ကလည်း
လူမိုက်ဆိုတာ ရုပ်ရှင်ထဲက လူမိုက်တွေလို...
အိုက်တင်ကများများ၊ လူအများကို ဒုက္ခပေးတဲ့ သူတွေပဲလို့အခါခါ တွေးခဲ့ဖူးတယ်။
အမေပြောတဲ့အတိုင်း အဲဒီလို လူမိုက်တွေကိုတော့ ဝေးဝေးက ရှောင်ခဲ့ပါတယ်။
အမေက ရန်ဖြစ်လာတာကို သိသွားပါတယ်။
အမေက " လူမိုက်ကို ဝေးဝေးသွားမရှာနဲ့။
ရန်ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ သားကိုယ်တိုင်က လူမိုက်ပဲ။
ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ လက်ခုပ်သံလိုပဲ လက်နှစ်ဖက်နဲ့တီးမှမြည်တာပါ။ လူနှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲ
အော်... လူမိုက်ဆိုတာ မကောင်းတဲ့အလုပ်ကို လုပ်တဲ့လူတိုင်းကို
တစ်နေ့တော့ မကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက် အကြောင်းကိုအမေ့ရဲ့ရှေ့မှာပြောမိတယ်။
အမေက "သူများရဲ့ မကောင်းကြောင်း ကိုပြောနေချိန်မှာ စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ပြောရတယ်။
" အမေ သူများရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုပြောတဲ့သူရဲ့စကားကို
အမေက " နားထောင်ရုံနဲ့တော့လူမိုက်မဖြစ်ပါဘူး၊
နားထောင်ပြီး မကောင်းတဲ့စိတ်၊ ဒေါသစိတ်၊ လောဘစိတ်တွေ ဖြစ်လာတယ် ဆိုရင်တော့ အဲဒီတဒင်္ဂကာလမှာတော့ လူမိုက်ပဲပေါ့။
ကိလေသာရဲ့သဘောက ပူလောင်တဲ့သဘော ရှိတဲ့အတွက်
အော်...လူမိုက်ဆိုတာ မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတာကို သတိနဲ့မထိမ်းရင်လည်း
ဒီလိုဆိုရင် ကျနော်ဟာ အချိန်အတော်များများမှာ
ဒါကြောင့် ကျနော်ဟာ အမေ မကြိုက်တဲ့ လူမိုက်မဖြစ်ချင်ပါဘူး။
ဖြစ်အောင် အများကြီး ကြိုးစား ရဦးမှာပါလား လို့
တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပို၍ပိုကာ သဘောပေါက် လာခဲ့ပါတယ်။ ။
တစ်ခါတုန်းက တောမှာ နေတဲ့ အဖေနဲ့
မြို့မှာ ကျောင်းတက်ပြီး ကျောင်းပိတ်လို့တောကို ပြန်လာတဲ့သားတို့၊
တောင်တက်လမ်း တစ်ခုမှာ သားဟာချော်လဲတော့ " အား....." လို့ အော်မိတာပေါ့။
တစ်နေရာကနေ " အား....."လို့ပြန်အော်တယ်။
ကလေးဖြစ်သူ သားလေးက အံ့အားသင့်သွားတယ်။
တစ်နေရာကနေပြီး... "ဟေ့...... ဘယ်သူလဲကွ..."
"အလကားကောင်....အရူး " လို့ထပ်ပြီး အော်လိုက်ပြန်တယ်။
"အလကားကောင်....အရူး " လို့ထပ်ကြားရ ပြန်တယ်။
သားက နားမလည်သောသဘောနဲ့ အဖေကို လှမ်းကြည့်ပြီး
"အဲဒါ ဘာဖြစ်တာလဲ ဟင်...?" လို့မေးလိုက်တယ်။
အဖေက ပြုံးလိုက်ပြီး ပြန်ပြောလိုက်တာက...
"သေသေချာချာ နားထောင်နော် သားငယ် "လို့ပြောပြီး အဖေကအော်လိုက်ပါတယ်။
အဖေက "လူသားတွေ အားလုံး ကျန်းမာကြပါစေ....."
"လူသားတွေ အားလုံး ကျန်းမာကြပါစေ....."လို့ပြန်ကြား ရပါတယ်။
အဖေက "လူသားတွေ အားလုံး ချမ်းသာကြပါစေ....."
"လူသားတွေ အားလုံး ချမ်းသာကြပါစေ....."လို့ထပ်ကြား ပြန်ပါတယ်။
သားငယ်က အံ့သြ နေတယ်။
အဲဒီတော့မှ တောသားကြီးအဖေက ရှင်းပြပါတယ်။
"အဲဒါကို ပဲ့တင်သံ လို့ခေါ်တယ်သားရဲ့၊
ဘ၀ဆိုတာ ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့ အတိုင်း ကိုယ်ဆီပြန်လာတာပါ၊
ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ အတိုင်း ကိုယ်ဆီကိုပြန်လာပါတယ်။
သက်ရောက်မှုတိုင်းမှာ ယင်းနဲ့တူညီတဲ့ တန်ပြန်သက်ရောက်မှု ဆိုတာရှိပါတယ်။
အဲဒါဟာ နေရာတကာမှာ မှန်သလို
အမြဲတမ်း မှန်တဲ့ အမှန်တရား တစ်ခုပါပဲ။
သားကလူတွေကို ချစ်စေချင်ရင် သားကိုယ်တိုင်က လူတွေကို ချစ်တတ်မှဖြစ်မယ်။
သားက လူတွေကို တော်စေချင်ရင်၊ ကောင်းစေချင်ရင်
သားကိုယ်တိုင်က တော်နေ၊ ကောင်းနေအောင်ကြိုးစားနေဖို့ လိုလိမ့်မယ်။
ဒါဟာ လောကရဲ့ နိယာမပါပဲ သားရယ်။
ကိုယ်ပြုတဲ့ကံ ... ပဲ့တင်သံ ကိုယ်ဆီ ပြန်လာမယ်တဲ့၊
နေရာတိုင်းမှာ ကိုယ်ပေးသလောက်ပဲ ပြန်ရမယ် ဆိုတာကို
ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါနဲ့ သားရယ်။"့
၁။ အကောင်းဆုံး ၀တ်စုံက အပြုံး
၂။ စိတ်ချမ်းသာစရာ အကောင်းဆုံးကား ပေးကမ်းခြင်း
၃။ ကျေနပ်စရာ အကောင်းဆုံးကား သူတစ်ပါးကို ကူညီခြင်း
၄။ အထက်ဆုံး အားဆေးကား အားပေးခြင်း
၅။ အထိရောက်ဆုံး အိပ်ဆေးကား စိတ်ငြိမ်းချမ်းမူ
၆။ အင်အား အကြီးမားဆုံး အရာကား မေတ္တာ
၇။ မရှိရင်မဖြစ်ဆုံး အရာက မျှော်လင့်ချက်
၈။ သြဇာအရှိဆုံး စကားလုံးက "ငါလုပ်နိုင်တယ်"
၉။ အကောင်းဆုံး ပိုင်ဆိုင်ခြင်းကား ယုံကြည်မှု
၁၀။ တန်ဖိုးအရှိဆုံး ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကား ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှု
၁၁။ အကူးစက်လွယ်ဆုံး စိတ်ဓာတ်ကတော့ ထက်သန်မှု
အတွေးမှာတော့ နှစ်မျိုး ရှိတာပေါ့။
ကောင်းတဲ့ အတွေးကို တွေးရတာက တွက်ခြေ ပိုကိုက်ပါတယ်။
ကောင်းတဲ့ အတွေးကို တွေးဖို့အတွက်
ကောင်းတဲ့ အတွေးတွေးဖို့အတွက် အထောက်အကူ ပြုလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဆန်းသစ်တီထွင်မှု အားလုံးဟာ အတွေးကစပြီးမှ လက်တွေ့ ဖြစ်လာတာပါ။
အဖြေ ထွက်လာတဲ့ အတွေးဟာ
လူကြီးမင်းအတွက်... အတွေးမှ အဖြေကောင်းတွေ ထွက်ပြီး
လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖေါ်နိုင်ပါစေ။
Take the risk........စွန့်စားလိုက်ပါ။
ကိုယ့်ဘ၀မှာ အဆိုးနဲ့ကြုံတိုင်း အမြဲတမ်း ကောင်းတာကို လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါ။
သူလုပ်သလို ပြန်လုပ်ခြင်းအားဖြင့် သူ့ထက်သာတဲ့သူ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
တစ်ကယ် လွတ်လပ်တဲ့သူ ဖြစ်ချင်တယ် ဆိုရင်
လုပ်သင့်တဲ့ အလုပ်ကို ဘယ်သူမှ မခိုင်းရပဲ လုပ်ပါ။
ကိုယ့်စိတ်ကူး၊ ကိုယ့်အတွေးအခေါ်နဲ့ ကိုယ်လုပ်ပါ။
ကိုယ့်ပညာရေးကို ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ထားပါ။
ကိုယ်ဘာကို တန်ဖိုးထားတယ် ဆိုတာကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဆုံးဖြတ်ပါ။
Take the risk........ စွန့်စားလိုက်ပါ။
လွတ်လပ်တဲ့ဘ၀ ကိုရဖို့စွန့်လွှတ်ရမယ် ဆိုရင် ဘာမဆို စွန့်လွှတ်နိုင်ရမယ်။
ကျေနပ်စရာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်မှုပဲ။
ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်အဆင့်အတန်းမြင့်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့လွတ်လပ်မှုဟာ
ဘယ်လို အလုပ်မျိုးကိုပဲ လုပ်လုပ် မိမိလုပ်တဲ့ အလုပ်ကြောင့်
မိမိကိုယ်ကို မိမိ ပူဇော်နိုင်ရမယ်။
မိမိကိုယ်ကို မိမိ လေးစားနိုင်ရမယ်။
နေ့စဉ်၊ နေ့စဉ်ကောင်းသည်ထက် ကောင်းတာတွေ လုပ်သွားဖို့၊
နောက်ဆုံးမှာ အမြင့်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ အရဟတ္တမဂ် ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်အာရုံပြုတဲ့ အရာဟာ ကိုယ့်လောက ဖြစ်လာတာပါပဲ။
မြင့်မြတ်တာကို အာရုံပြုနေတဲ့ အချိန်မှာ
အေးချမ်းတာကို အာရုံပြုနေတဲ့ အချိန်မှာ
ကိုယ့်စိတ်ထဲဝင်လာတဲ့ အရာဟာ ကိုယ့်လောကကို ဖန်တီးလိမ့်မယ်။
အခု ရသလောက်ကို သင်ထားပါ။ လေ့လာထားပါ။
နောက်တဖြေးဖြေး ကိုယ်တတ်ထားတာတွေ အပေါ် အခြေခံပြီးတော့
အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ သူဟာအခုလုပ်လို့ရတာ၊ လုပ်လို့ ဖြစ်တာကို လုပ်နေပါ။
အတွေ့အကြုံ ရလာတဲ့အခါ ဒီထက် အဆင့်မြင့်တာကို တဖြေးဖြေးတိုးပြီး လုပ်သွားပါ။
ဘာမှမလုပ်ပဲ နေရင် ဘာမှဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။
ပြီးမှတိုးတက်မှု ရှိအောင် ဆက်ပြီး ကြိုးစားပါ။
“ မင်းမှာ သစ္စာ၊ လူမှာ ကတိ၊ ”
`ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘုရင်ကြီး ထက်ဥာဏ်ကောင်းတဲ့လူတစ်ဦးရှိလာလိမ့်မယ်။
အဲဒီလူက ပထမမှာ သမီးတော်ကို သိမ်းပိုက်လိမ့်မယ်။
ဒီတော့ အာဏာကို လက်လွှတ်မှာကြောက်တဲ့စိတ်က
ဒါကြောင့် ဘုရင်ကြီးက သူ့သမီးကို ဘယ်သူနဲ့မှ မပေးစားချင်ဘူးတဲ့။
ဒါနဲ့ သတိုးသားလောင်းတွေအတွက် စမ်းသပ်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ဘုရင်ကြီးက အိတ်ကလေးထဲကို ကျောက်ခဲစေ့ နှစ်စေ့ ထည့်လိုက်တယ်။
တစ်လုံးက အနီရောင် ကျောက်ခဲ၊
နောက်တစ်လုံးက အပြာရောင် ကျောက်ခဲ၊
ကျောက်ခဲအနီကို ဆွဲထုတ်လိုက်သူဟာ ခေါင်းဖြတ်ခံရမယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကံကောင်းမယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့လူငယ်တွေ
ဖြစ်ချင်တော့ ကျောက်ခဲအနီပဲ ထွက်လာတော့
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရွယ်ရောက်လူငယ်တွေ နည်းသထက်နည်းလာတယ်။
နောက်ဆုံး ကံစမ်းချင်တဲ့ လူတစ်ယောက်မှ မရှိတော့ဘူးလို့ထင်ရတဲ့အချိန်မှာ
အဲဒီ လူငယ်က ကျောက်ခဲထည့်ထားတဲ့အိတ်ကလေးကို တောင်းတယ်။
ကျောက်ခဲစေ့ တစ်စေ့ကို အမြန်ဆွဲထုတ်ပြီး အနားမှာရှိတဲ့ မြစ်ထဲကို
“ စိုးရိမ်ကြောင့်ကျတဲ့စိတ်ကြောင့် သူ
ကျန်ခဲ့တဲ့ ကျောက်ခဲကိုဘဲ ဘုရင်ကြီးနဲ့ လူကြီးမင်းများ ကြည့်ကြပါ။ ”
ကျန်ခဲ့တဲ့ ကျောက်ခဲကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ကျောက်ခဲအနီဖြစ်နေတာမို့
အများပြည်သူတွေရဲ့ရှေ့မှာ ဆိုတော့ ဘုရင်ကြီးလည်း ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ပါဘူး။
`မင်းမှာ သစ္စာ၊ လူမှာ ကတိ´ဆိုတဲ့အတိုင်း
အိတ်ထဲမှာ ကျောက်ခဲအနီ နှစ်လုံးစလုံး ထည့်ထားတာကြောင့်
ဆိုတာ ဘုရင်ကြီးတစ်ဦးပဲ သိတာပါ။
တစ်ခါတုန်းက အသက်(68)နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး တစ်ဦးဟာ
သူ့ဘ၀ရဲ့အချိန် တော်တော်များများကို သူ့ရဲ့ဓါတ်ခွဲခန်းထဲမှာပဲ ကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်နေ့မှာတော့ နေ့လည်စာကို အပြင်မှာထွက်စား ပါတယ်။
စားပြီးအပြန်မှာတော့ သူ့ရဲ့ဓါတ်ခွဲခန်းဟာ မီးလောင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မီးတောက်မီးလျှံကြီးကို အေးအေးဆေးဆေး ရပ်ကြည့်နေမိပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ သတင်းထောက်တစ်ဦး ရောက်လာပြီး မေးပါတယ်။
"အခုလို အသက်အရွယ်ကြီးမှာ ဓါတ်ခွဲခန်းအလုပ်ရုံကြီး မီးလောင်သွားတော့ ဘယ်လိုခံစားရပါသလဲ...?"
"ဒီဓါတ်ခွဲခန်းဟာကျုပ်အတွက် ငယ်နေတာ ကြာပြီ။
ဓါတ်ခွဲခန်း တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့စိတ်ကူးယဉ်နေတာလည်း ကြာပြီပေါ့ကွယ်။
အခုဓါတ်ခွဲခန်း မီးလောင်သွားတော့ စိတ်ကူးယဉ်ထားတာတွေ မြန်မြန်အကောင်အထည်ပေါ်လာတာပေါ့။
ဒါကြောင့် ထူးထူးခြားခြားတော့ မခံစားရပါဘူး"
အဲဒီ သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးဟာ ထူးခြားတဲ့ စမ်းသပ်ချက်တစ်ခု အောင်မြင်သွားတဲ့အတွက်
အဲဒီ မီးလောင်သွားတဲ့ နေရာမှာပဲ လေးဆလောက်ကြီးတဲ့
ဓါတ်ခွဲခန်း တစ်ခုကို တည်ဆောက် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးရဲ့ နာမည်ကတော့.... အက်ဒီဆင်ဖြစ်ပါတယ်။
သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးဟာ အခြေခံပညာလောက်ပဲ သင်ခဲ့ဘူးပါတယ်။
ဥာဏ်နည်းတယ်ဆိုပြီး ကျောင်းထုတ် ခံခဲ့ရပါတယ်။
နားလဲမကြားရပါဘူး။ ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ ဘ၀ကို ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီ အကြောင်းအရာတွေက အောင်မြင်မှုအတွက် အရေးမကြီးဘူး ဆိုတာကို
အသက်(68)နှစ် ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ ဘ၀ကို အစက ပြန်စဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျနော်တို့ထင်ထားခဲ့ပေမဲ့
အက်ဒီဆင်က လွယ်လွယ်လေး လုပ်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ကျနော်တို့ မီးရောင်အောက်မှာ အေးအေးဆေးဆေး စာဖတ်နိုင်တာ၊ အလုပ်လုပ်နိုင်တာတွေဟာ အက်ဒီဆင်ရဲ့ကျေးဇူး မကင်းပါဘူး။
အက်ဒီဆင်ဟာ လျှပ်စစ်မီးလုံး အပါအ၀င် တီထွင်မှုပေါင်း
နှစ်ထောင်ကျော်ကို မှတ်ပုံတင် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်တို့ရဲ့ စိတ်စေတနာ ကောင်းတဲ့အဖိုးတွေကဖေါက်ခဲ့တာပါ။
ကျနော် " လေးစားတယ်။အားကျတယ်။"
"ငါသေရင် အကောင်းတွေ ဘာချန်ထားရမလဲ................? "
လူကြီးမင်းကရော..... " အကောင်းတွေ ဘာချန်ထားခဲ့မလဲ...............?"
“ ကြီးလာရင် ဘာဖြစ်လာမလဲ.......”
သူတို့သားကြီးလာရင် ဘာဖြစ်လာမလဲလို့ စိတ်ပူပင်သောက ရောက်နေကြတယ်။
စားပွဲပေါ်မှာ ငွေ ငါးထောင်တန်တစ်ချပ်၊
အဲဒီသုံးခုအနက် ဘာကို သားကရွေးချယ်တာကို တိတ်တိတ်ပုန်းစောင့်ကြည့်ရပါမယ်။
သားက ငွေက်ို ရွေးချယ်ယူပါက
ကြီးလာရင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကြီးလာရင် ဘုန်းကြီးတစ်ပါး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကြီးလာရင် အရက်သမားတစ်ဦး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။”
မိဘများဟာ မိတ်ဆွေရဲ့အကြံပေးတဲ့အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပြီး
သားဟာ အိမ်ပြန်ပြီး အခန်းထဲ ၀င်သွားပါတယ်။
သားက ငွေကိုကောက်ယူပြီး အိတ်ကပ်ထဲ ထည့်လိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ဘာသာရေးစာအုပ်ကိုလည်း ကောက်ယူပြီး
နောက်ဆုံးမှာတော့ ၀ီစကီအရက်ပုလင်းကိုလည်း ကောက်ယူပြီး
တစ်ခါတုန်းက အမေရိကန် နှစ်ယောက်ဟာ ဘရုကလင်တံတားပေါ်တွင် ရပ်နေကြတယ်။
အမေရိကန် တစ်ယောက်ကပြောတာက“ ဟိုမှာ တွေ့လား?
အဲဒီ ငနဲ ဒီတံတားပေါ်ကခုန်ချအောင် ငါလုပ်ပြမယ်။
“ စိန်လိုက် ”
ပထမ အမေရိကန်က ပြင်သစ်အနားကို ကပ်သွားပြီး ပြောတယ်။
“သတင်းကြားပြီးပြီလား။ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ ဇိမ်ခန်းတွေ အားလုံးကို ပိတ်လိုက်ပြီတဲ့။ ”
ပြင်သစ်အမျိုးသားဟာ ခေါင်းကို လက်နှစ်ဘက်နှင့် ကုတ်ခြစ်ပြီး တံတားပေါ်က ခုန်ချသွားတယ်။
မကြာခင်မှာ အင်္ဂလိပ်အမျိုးသားတစ်ယောက် လမ်းလျှောက်လာတယ်။
သူလည်း တံတားပေါ်က ခုန်ချစေရမယ်လို့
စိန်ခေါ်ပြီး ဆယ်ဒေါ်လာကြေး အလောင်းအစားလုပ်ပြန်တယ်။
ပထမ အမေရိကန် က အင်္ဂလိပ်အနားကိုကပ်သွားပြီးပြောတာက
ခင်ဗျာတို့ရဲ့ ဗြိတိသျှ ပါလီမန် အဆောက်အဦးကို ပိတ်ပြီး
အဲဒီနေရာမှာ အပျံစားဇိမ်ခန်းကြီးတစ်ခုကို ဖွင့်လိုက်သတဲ့။ ”
အင်္ဂလိပ်အမျိုးသားဟာလည်း ခေါင်းကို ကုတ်ပြီး တံတားပေါ်က ခုန်ချသွားပြန်ပါတယ်။
အဲဒီ တံတားပေါ်ကို ရုရှားအမျိုးသား လျှောက်လာပြန်တယ်။
ဒုတိယအမေရိကန်က ရုရှားအမျိုးသားဟာ ဘယ်တော့မှ ခုန်ချမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုကာ ဒေါ်လာ တစ်ရာကြေးလောင်းလိုက်ပြန်ပါတယ်။
ပထမအမေရိကန်က ရုရှားအနားကို ကပ်သွားပါတယ်။
ပြီးတော့ ပြောလိုက်တာက“ ဒီမှာ.....ရဲဘော်။ တံတားပေါ်က ခုန်မချရလို့တားမြစ်ထားတယ်နော်။ ခင်ဗျာသိအောင် စေတနာနဲ့သတိပေးတာနော်။”
“တားမြစ်ထားတယ် ဟုတ်လား။ ကျုပ်က ဂရုစိုက်မယ် ထင်သလားဗျ ဟင်”လို့
အော်ပြောကာ ရုရှားကြီးက တံတားပေါ်က ခုန်ချသွားပါတော့တယ်။
လူ့စိတ်၊လူ့သဘောကို နားလည်းထားမယ်ဆိုရင် ပြောဆို၊လုပ်ကိုင်ရတာ အလွန်လွယ်ကူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဖေါ်ပြထားတဲ့ ပုံပြင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောကကြီးကိုက ၀မ်းနည်းကြေကွဲစရာ လောကကြီးပါ၊
၀မ်းနည်းကြေကွဲမှုဟာ လူတိုင်းဆီကို ရောက်လာစမြဲ။
ရောက်လာပြန်ရင်လည်း ဝေဒနာတွေက ခါးခါးသီးသီး၊ ပြင်းပြင်းထန်ထန်၊
လုံးလုံးလျှားလျှား ပျောက်ကင်းသွားမယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ပါပဲ၊
အချိန်ရဲ့ကုစားမှု မရခဲ့ဘူး ဆိုရင်ပေါ့။
လောလောဆယ်မှာ ပြန်ကောင်းလာမယ်လို့တောင် မထင်တော့ဘူးလေ။
လတ်တလောအချိန်မှာ ခံစားရတဲ့ ၀မ်းနည်းကြေကွဲမှု-ဒုက္ခဟာ
အထိုက်အလျှောက် လျော့ပါးသွားပါ လိမ့်မယ်။
ကျနော်မှာ အတွေ့အကြုံတွေ...လုံလုံလောက်လောက် ရှိနေလို့ပါ။
တက္ကသိုလ်မှာ ဆုံရင်း မိတ်ဆွေဖြစ်သွားကြပါတယ်။
ဘာသာရပ်တူ၊ အဆောင်တူ ကြတော့ သွားအတူ၊လာအတူနဲ့ပေါ့။
တောသားက " ပုရစ်သံ ကြားတယ် မင်းကြားလား? "လို့မေးလိုက်ပါတယ်။
မြို့သားက "မကြားမိဘူး၊ ကားသံ...လူသံတွေ ဒီလောက်ဆူညံနေတာ၊
တောသားက ပြောပြောဆိုဆို အသံလာရာဘက်ကိုသွားပြီး လက်နဲ့အုပ်ဖမ်းလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ မြို့သားကို ပုရစ်တစ်ကောင်ပြလိုက်တယ်။
မြို့သားက "မင်းကတောသားဆိုတော့ဒီအသံတွေနဲ့ယဉ်ပါးနေတော့ ကြားရတာပေါ့။"
တောသားက "ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး၊သတိထားပြီး နားထောင်ရင်ကြားနိုင်ပါတယ်၊
သဘာဝအသံကို မကြားရတာပါ ငါ လက်တွေ့ပြမယ်။"
ဆိုပြီး အိတ်ထဲက အကြွေစေ့တစ်စေ့ကို ထုတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့...
လူတွေဟာ ငွေနောက်ကိုဘ၀ရဲ့အချိန်အတော်များများ ပေးပြီးလိုက်ကြတယ်။
ငွေရှိရင် ပျော်ရွင်မှုများစွာကို ဖန်တီးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း လက်ခံပါတယ်။
ငွေဟာ စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကို တကယ်မပေးနိုင်ပါဘူး။
ငွေဟာ ရုပ်ဝတ္တု၊ ငွေဟာ ပြင်ပအကြောင်းအရာတစ်ခု။
စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကို ငွေနဲ့ဝယ်လို့မရပါဘူး။ငွေနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့ အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဟာ တကယ်တော့စိတ်အတွင်းက လာရတာမျိုးပါ။
သတိနဲ့နေတတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ရှိရင်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သဘာဝရဲ့အလှအပကို ချစ်တတ်ရင်လည်း စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေဟာ လူတိုင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ငွေနဲ့ဝယ်စရာမလိုပါဘူး။
ဘ၀တိုတိုလေးမှာ ငွေသံကိုဘဲ နားထောင်မလား..?.
အစစ်အမှန် တန်ဖိုးကိုဘဲ တည်ဆောက်မလား...?။
တစ်ခါတုန်းက... ရေနံဓါတုနဲ့ဒေါက်တာဘွဲ့ရထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးဟာ သဲကန္တာရတစ်ခုရဲ့ရေနံမြေမှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်။
တစ်နေ့တော့ အရေးပေါ်ကိစ္စနဲ့အင်္ဂလန်ကိုပြန်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။
လေကြောင်းနဲ့ပြန်ဖို့အားလုံးစီစဉ်ပြီးကာမှ တစ်စီးတည်းသောဂျစ်ကားက ပျက်နေတယ်။
လေယာဉ်ကွင်းကိုသွားရင် (45)မိနစ်လောက်ကြာတဲ့ ခရီးမှာကားနဲ့သွားမှ
လေယာဉ်ကိုမီနိုင်မှာဆိုတော့ ဂျစ်ကားကိုအတတ်နိုင်ဆုံးပြင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကားကအစဉ်မပြေပါဘူး။
လေယာဉ်ချိန်ကလည်းနီးသထက်နီးလာပြီး။ စိတ်ကလည်း ပူသထက် ပူလာပြီး။
ဘာလုပ်ရပါ့မလဲ....။ အဲဒီအချိန်မှာ အာရပ်ကြီး တစ်ယောက်က ကုလားအုတ်တစ်ကောင်နဲ့ရောက်လာပြီးအခြေအနေ
ကိုစပ်စုတယ်။ အာရပ်ကြီးက ပြောတယ်။
"ကားပျက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကုလားအုတ်နဲ့သွားရင် လေယာဉ်ကွင်း
သင်ရပါတော့တယ်။ အာရပ်ကြီးက " ဟူး... "လို့ပြောရင်စပြေးတော့တာဘဲ။
ပြေးလိမ့်မယ်။" ဟူး...ဟူး...ဟူး... "လို့သုံကြိမ်ဆက်တိုက်ပြောရင် အမြန်ဆုံးပြေးလိမ့်မယ်။
ရပ်ချင်ရင်တော့" အာမင်... " လို့ပြောပါ။
လေယာဉ်ကွင်းအချိန်မီရောက်ဖို့ကုလားအုတ်ပေါ်တက်စီးပြီး" ဟူး... "လို့ပြောတာနဲ့ ကုလားအုတ်ကစပြေးတော့တာပဲ။
စိတ်လောနေတဲ့အတွက်" ဟူး...ဟူး... "လို့ဆက်ပြောတော့ ကုလားအုတ်က
အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြေးနေပြီ။ အားမရသေးတာနဲ့" ဟူး...ဟူး...ဟူး... "အမိန့်ပေးလိုက်တာနဲ့ ကုလားအုတ်ဟာ
စိတ်ပူနေတာနဲ့ ရပ်ဆိုတဲ့စကားကိုမေ့နေတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ...။ ဘုရားစာတွေကိုရွတ်ရပြီ။ဘုရားစာရဲ့အဆုံးမှာ "အာမင် "လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ကုလားအုတ်က တုန့်ကနဲ
ရပ်သွားပါတယ်။ မျက်လုံးကိုပွတ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ လား...လား...ချောက်ကမ်းပါးရဲ့အစွန်းနားမှာရောက်နေပါပေါ့လား။
တစ်ခါတုန်းက... လူကြီးလူကောင်း တစ်ဦးဟာ ဆေးရုံ တက်နေရတယ်။
လူကြီးဆိုပေမဲ့ အသက်ကမကြီးသေးပါဘူး။ ရာထူးကြီးလို့လူကြီးပြောတာပါ။
လူနာရဲ့ ရောဂါအခြေအနေက ဆိုးသထက်ဆိုး လာတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ဆရာဝန်ကြီးတွေက လူနာကို
အိမ်မှာပြန်ပြီးနေလိုက နေနိုင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ လူနာလည်း အိမ်ကို ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ရောက်တော့ လူနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေက
လူနာရဲ့အခြေအနေကို မေးဖို့ အများအပြား ရောက်လာကြပါတယ်။
မသိတဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေက “ဘာရောဂါဖြစ်တာလဲ ”လို့မေးကြတဲ့ အခါမှာတော့
လူနာက “AIDS အက်(စ်)ရောဂါဖြစ်တာပါ”လို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ လုံးဝမမျှော်လင့်ထားတဲ့အဖြေမို့အားလုံးက တအံ့တသြ
ဖြစ်ကြတာပေါ့။အများစုကတော့မယုံနိုင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူနာကိုယ်တိုင်ကပြောနေတော့လည်းမယုံလို့မဖြစ်ပြန်ဘူး။
အံ့သြ စိုးထိတ်စွာနဲ့ဘဲ မိတ်ဆွေတွေ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဟာ တစ်ဦးပြီးတစ်ဦး ပြန်သွားကြတယ်။ အနားမှာတစ်ဦးမှမရှိတဲ့အချိန်မှာသားကြီးက အဖေကိုမေးပါတယ်။
“ အဖေ....အက်(စ်)ရောဂါ တကယ်ဖြစ်တာလားဟင်...”
“ ဘယ်ကလာဟုတ်ရမှာလဲ...အက်(စ်) ရောဂါဖြစ်တယ်လို့ပြောထားရင်
ငါသေသွားတဲ့အခါ မင်းအမေအနားကို ဘယ်သူမှ မကပ်ရဲတော့ဘူးပေါ့။”.....ဟူသတည်း။